“နာကျင်မှုတွေကနေ..လွတ်မြောက်ချင်ပြီ..” ဆိုတဲ့ နန်းဆုရတီစိုး – ရွှေအလင်း
“နာကျင်မှုတွေကနေ..လွတ်မြောက်ချင်ပြီ..” ဆိုတဲ့ နန်းဆုရတီစိုး
G-Fatt နဲ့ နန်းဆုဆိုတာ..မနဲ့မောင် အချစ်ကို အားကျသူတွေအတွက် တကယ့်ကို Idol စုံတွဲပါပဲ… G-fatt က အရမ်းစသလောက် နန်းဆုကလည်း စိတ်မဆိုးဘဲ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် နားလည်မှုတွေနဲ့ ချစ်ခရီးလမ်းကို လျှောက်လမ်းနေကြသူတွေပါ…
ဒါပေမဲ့ ခုတလော သတင်းတွေအရ နန်းဆုနဲ့ G-fatt တို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေးက အနည်းငယ်အေးစက်လာတယ်လို့ သိရပါတယ်…အမြဲတမ်း စုံတွဲပုံလေးတွေ တင်ပြီး ပရိသတ်တွေ အရမ်းအားကျချစ်ခင်ပြီး လိုက်ဖက်တဲ့ စုံတွဲလို့ သတ်မှတ်ထားကြတဲ့ သူတို့အတွဲ ဘာများ ပြဿနာတွေဖြစ်ကြသလဲ ဆိုပြီး ပရိသတ်တွေကလည်း စိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာပါ…
မကြာသေးမီကလည်း နန်းဆုဟာ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ အဆင်မပြေတော့တဲ့အကြောင်းတွေ ဖွင့်ဟ လာတော့ ပရိသတ်တွေကို ပိုစိုးရိမ်လာကြပါတယ်…
ခုတစ်ခါမှာတော့ နန်းဆုဟာ သူမရဲ့နှလုံးသားရေးရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူမ Facebook Myday မှာ ခုလိုလေး Post တစ်ခု တင်ခဲ့ပါတယ်….
“ဘယ်လိုမှ မတတ်နိုင်ဘူး..ကိုယ်တန်ဖိုးအထားဆုံးက သစ္စာတရား ဖြစ်နေတော့…”
လို့ အသည်းကွဲနာကျင်နေတဲ့ပုံစံစာလေးတွေ တင်ခဲ့ပါတယ်…
“ချစ်သူစုံတွဲတိုင်းမှာ ကိုယ်တန်ဖိုးထားတဲ့ အရာတွေရှိုကြပါတယ်.. တန်ဖိုးထားတဲ့ အရာတွေကို ထိရင် ဘယ်သူမှ ခွင့်လွှတ်မှာ မဟုတ်ဘူး… နန်းဆုက အများကြီးလည်း မမျှော်လင့်ဘူး သာမာန်လောက်ပါပဲ… ဂုဏ်ငွေ ပကာသန တွေမလိုဘူး… နန်းဆု လိုချင်တာ ၊ သစ္စာတရားရယ်၊ မေတ္တာတရား၊ ကိုယ်ချင်းစာတရားရယ်ပဲ လိုချင်တာပါ… အဲဒီထဲကမှ တစ်ခုတစ်လေပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၂ခုပဲ ဖြစ်ဖြစ် မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် အဲဒါမျိုးမပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုရင် ရှေ့ဆက်ဖို့ အဆင်မပြေနိုင်တော့ဘူးပေါ့…” လို့ နန်းဆုက ဖြေခဲ့ပါသေးတယ်…
ခုလို အင်တာဗျူးတွေ Post တွေမှာ ပြောထားတင်ထားတဲ့ စာတွေအရ နန်းဆုနဲ့ G-Fatt ဟာ တကယ်ပဲလမ်းခွဲလိုက်ကြပြီလား..ဒါမှ မဟုတ် စိတ်ကောက်နေကြတာလား…ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် နန်းဆုတစ်ယောက် နာကျင်မှုတွေဆီကနေ လွတ်မြောက်ဖို့နဲ့ သူတို့ ၂ ဦး ပြန်အဆင်ပြေဖို့ ပရိသတ်တွေက ဆုတောင်းပေးနေကြပါတယ်…
G-Fatt နဲ့ နနျးဆုဆိုတာ..မနဲ့မောငျ အခဈြကို အားကသြူတှအေတှကျ တကယျ့ကို Idol စုံတှဲပါပဲ… G-fatt က အရမျးစသလောကျ နနျးဆုကလညျး စိတျမဆိုးဘဲ တဈယောကျကို တဈယောကျ နားလညျမှုတှနေဲ့ ခဈြခရီးလမျးကို လြှောကျလမျးနကွေသူတှပေါ…
ဒါပမေဲ့ ခုတလော သတငျးတှအေရ နနျးဆုနဲ့ G-fatt တို့ရဲ့ ဆကျဆံရေးက အနညျးငယျအေးစကျလာတယျလို့ သိရပါတယျ…အမွဲတမျး စုံတှဲပုံလေးတှေ တငျပွီး ပရိသတျတှေ အရမျးအားကခြဈြခငျပွီး လိုကျဖကျတဲ့ စုံတှဲလို့ သတျမှတျထားကွတဲ့ သူတို့အတှဲ ဘာမြား ပွဿနာတှဖွေဈကွသလဲ ဆိုပွီး ပရိသတျတှကေလညျး စိုးရိမျပူပနျနကွေတာပါ…
မကွာသေးမီကလညျး နနျးဆုဟာ အငျတာဗြူးတဈခုမှာ အခဈြရေးနဲ့ ပတျသကျလို့ အဆငျမပွတေော့တဲ့အကွောငျးတှေ ဖှငျ့ဟ လာတော့ ပရိသတျတှကေို ပိုစိုးရိမျလာကွပါတယျ…
ခုတဈခါမှာတော့ နနျးဆုဟာ သူမရဲ့နှလုံးသားရေးရာနဲ့ ပတျသကျပွီး သူမ Facebook Myday မှာ ခုလိုလေး Post တဈခု တငျခဲ့ပါတယျ….
“ဘယျလိုမှ မတတျနိုငျဘူး..ကိုယျတနျဖိုးအထားဆုံးက သစ်စာတရား ဖွဈနတေော့…”
လို့ အသညျးကှဲနာကငျြနတေဲ့ပုံစံစာလေးတှေ တငျခဲ့ပါတယျ…
“ခဈြသူစုံတှဲတိုငျးမှာ ကိုယျတနျဖိုးထားတဲ့ အရာတှရှေိုကွပါတယျ.. တနျဖိုးထားတဲ့ အရာတှကေို ထိရငျ ဘယျသူမှ ခှငျ့လှတျမှာ မဟုတျဘူး… နနျးဆုက အမြားကွီးလညျး မမြှျောလငျ့ဘူး သာမာနျလောကျပါပဲ… ဂုဏျငှေ ပကာသန တှမေလိုဘူး… နနျးဆု လိုခငျြတာ ၊ သစ်စာတရားရယျ၊ မတ်ေတာတရား၊ ကိုယျခငျြးစာတရားရယျပဲ လိုခငျြတာပါ… အဲဒီထဲကမှ တဈခုတဈလပေဲ ဖွဈဖွဈ ၂ခုပဲ ဖွဈဖွဈ မရှိခဲ့ဘူးဆိုရငျ အဲဒါမြိုးမပေးနိုငျတော့ဘူးဆိုရငျ ရှဆေ့ကျဖို့ အဆငျမပွနေိုငျတော့ဘူးပေါ့…” လို့ နနျးဆုက ဖွခေဲ့ပါသေးတယျ…
ခုလို အငျတာဗြူးတှေ Post တှမှော ပွောထားတငျထားတဲ့ စာတှအေရ နနျးဆုနဲ့ G-Fatt ဟာ တကယျပဲလမျးခှဲလိုကျကွပွီလား..ဒါမှ မဟုတျ စိတျကောကျနကွေတာလား…ဘာပဲ ဖွဈဖွဈ နနျးဆုတဈယောကျ နာကငျြမှုတှဆေီကနေ လှတျမွောကျဖို့နဲ့ သူတို့ ၂ ဦး ပွနျအဆငျပွဖေို့ ပရိသတျတှကေ ဆုတောငျးပေးနကွေပါတယျ…
အချိန်မတော် မိန်းကလေးတစ်ယောက် ငိုယိုပြီး အိမ်တံခါးကို ဖွင့်ခိုင်းရင် လုံးဝမဖွင့်ပေးပါနဲ့
လမ်းမကူးရဲတဲ့ခွေးကို ကူညီဖို့ သိုင်းကွက်တွေအဆန်းတွေနဲ့ လမ်းမကြီးကို ဖြတ်တဲ့လူ..ကြည့်တဲ့လူတောင် နှလုံးရောဂါရသွားနိုင်တယ်
နေ့ခင်းကြောင်တောင် ဆိုင်ကယ်ပေါ်ဆွဲတင်ပြေးဖို့ ကြံတဲ့ လူယုတ်မာ ၂ ဦးလက်ထဲကနေ ကျောင်းသူလေးတစ်ဦးကို ကယ်တင်လိုက်တဲ့ သူရဲကောင်းဆရာမလေး
Line Walker2ရုပ်ရှင်ဇာတ်​ဝင်​ခန်း၌ အသုံးပြုပြီးသော မော်တော်ယာဉ်များ